मानिसहरु आत्तिएर रुन थालेपछि झन् गाह्रो भयो, हामी यहिँवाट हा’मफा’ल्छौं भनेर आग्रह पनि गर्यौ ! - Babal Khabar
मानिसहरु आत्तिएर रुन थालेपछि झन् गाह्रो भयो, हामी यहिँवाट हा’मफा’ल्छौं भनेर आग्रह पनि गर्यौ !
September 27, 2021 by बबाल खबर
सोमबार काठमाडौंबाट विराटनगर जान बुद्ध एयरको विमान चढ्दा यात्रुले उनीहरुको जिवनमा के हुनसक्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।
जब जहाज विराटनगर पुग्यो अवतरण गर्ने क्रममा ल्याण्डिग गियरले काम नगरेपछि अवतरण हुन सकेन । विमान चालकले विराटनगरकै आकासमा धेरै पटक फन्को लगायो । तर पनि चक्का खुलेन ।
विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि फेरि काठमाडौं फर्कियो । काठमाडौ आइसकेपछि पनि सोचेजस्तो सजिलै अवतरण हुन सकेन ।
विमानभित्र रहेका यात्रुहरु निकै डराएका थिए । कोही कराउन लागे भने कोही रुन लागे । विमानमा भएको इन्धन सकेर धावनमार्गमा फम राखेर अवतरण गराउने योजना पाइलटले बनाएको थाहा पाएपछि झन यात्रुहरु डराए ।
तर विमालाई निकै तल ल्याएर हेर्दा ल्याण्डिङ गियर खुलेपछि त्यस्तो गर्नु परेन । विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकेर काठमाडौ फर्कदा सम्म खासै केही प्रतिकृया नदिएका यात्रुहरु जब काठमाडौ विमानस्थलमा पनि सजिलै अवतरण गर्न नसकेर फन्को लगाउन थाल्यो अनि यात्रुको होस उड्यो ।
जहाजभित्र रु’वा’बासी चल्न थाल्यो । माथिवाट हेर्दा विमानस्थलमा पनि सुरक्षाकर्मीहरु तयारी अवस्थामा देखेपछि झन के हुन लाग्यो भनेर डराए । कतिपयले त हामी यहिँवाट हा’म फा ल्छौं भ’नेर आग्रह पनि गरे ।
विमान परिचारिकाहरुले यात्रुलाई सान्त्वना दिइरहे । इन्धन सकेर धावनमार्गमा पानी छर्केर त्यसमाथि फम राखेर अवतरण गराउने हो भनेर जानकारी दिए ।अर्का यात्रु अनमोल प्रधानल लगायतले विमानभित्रको अवस्था बताउन सक्ने अवस्थामा नभएको उल्लेख गरे ।
साना बालबालिका र उनीहरुका आमा ड’राएर रुन लागेपछि अवस्था झन विग्रन थालेको उनको अनुभव थियो । एयर होस्टेसको आँखामा पनि आँसु देखेपछि सबैले आस मा रे का थिए ।अर्का यात्रु अनमोल प्रधानले भने, जहाजभित्र रु’वा’बासी हुन थाल्यो ।
जति कन्ट्रोल गरे पनि त्यो रुवाबासीले गर्दा आँशु रोक्न सकिएन । हामीले आस मा’रिसकेका थियौं । आकाशमा घुमिरहेको विमानबाट रनवेमा हेर्दा एम्बुलेन्स, पुलिस सबै तैनाथ थिए । हामीलाई त भगवानले मात्रै बचाएको जस्तो लाग्छ । भगवान पशुपतिनाथको कृपाले बाँच्यौं । सबैजना भित्र हात जोडेर बसिरहेका थियौं । ताजा खबरबाट साभार गरियको खबर ।
Prevएयर होस्टेसको आँखामा आँसु थियो, तर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो – जहाज भित्र यात्रीको अनुभव
nextरमेश र नन्दा माता पिता बन्दै,डाक्टरले मिति दिइसक्यो ( भिडियो हेर्नुस् )